२०७९ स्थानीय तह निर्वाचन
धनुषाको १० पालिकामा कांग्रेस, तीनमा जसपा,दुईमा एमाले र एकमा माओवादी केन्द्र निर्वाचित धनुषा । गत वैशाख ३० गते सम्पन्न भएको स्थानीय तहको निर्वाचन अन्तर्गत धनुषाका १८ पालिका मध्ये १६ पालिकाको मतपरिणाम सार्वजनिक भएको छ भने दुईवटाको मतगणना जारी छ । ती मध्ये १० मा नेपाली कांग्रेस, तीनमा जनता समाजवादी पार्टी (जसपा), दुईमा नेकपा (एमाले) र एकमा नेकपा (माओवादी केन्द्र) का उम्मेदवारले विजयी हासिल गर्न सफल भएका छन् ।
७०६ स्थानीय तहको अन्तिम मत परिणाम सार्वजनिक काठमाडौं । गत वैशाख ३० गते सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचनको हालसम्म ७०६ स्थानीय तहको अन्तिम मत परिणाम सार्वजनिक भइसकेको छ । निर्वाचन आयोगका अनुसार गाउँपालिका, नगरपालिका र महानगरपालिका गरी ७०६ को मतगणना सम्पन्न भइ परिणाम सार्वजनिक भएको छ । मुलुकभर कूल ७५३ पालिका रहेकामा गणना सकिएका पालिकाको प्रतिशत ९३ दशमलव ९४ प्रतिशत देखिएको छ । मतपरिणाममा नेपाली कांग्रेस अग्रणी रहेको छ भने त्यसपछिको क्रममा नेकपा (एमाले), नेकपा (माओवादी) केन्द्रलगायत रहेका छन् ।
भरतपुरमा रेनु दाहालको निरन्तर अग्रता, ७८५४ मतान्तर चितवन । चितवनको भरतपुर महानगरपालिकाको मेयर पदमा सत्ता गठबन्धनको साझा उम्मेदवार नेकपा माओवादी केन्द्रकी रेनु दाहालले निरन्तर अग्रता बनाउनुभएको छ । हालसम्म ९२ हजार १२८ मतगणना हुँदा रेनुले निकटतम प्रतिद्वन्द्वी एमालेका विजय सुवेदीसँग ७८५४को मतान्तर बनाउनुभएको छ ।
धनगढी उपमहानगरमा स्वतन्त्र उम्मेदवार हमाल विजयी धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेशको एकमात्र उपमहानगरपालिका धनगढी उपमहानगरपालिकाको प्रमुख पदमा स्वतन्त्र उम्मेदवार गोपाल हमाल भारी मतान्तरले निर्वाचित हुनुभएको छ । हमाल १२ हजार बढी मतले निर्वाचित हुनुभएको हो ।
बाजुराकाे बूढीगंगामा मतदान कि मतगणना ? बाजुरा । जिल्लाका आठ पालिकाको मत परिणाम आए पनि बूढीगंगा नगरपालिकाको मतदान गर्ने कि मतगणना गर्ने विषयमा भने विवाद छ । नगपालिकाका वडा नं २, ३, ५ र ९ वडामा कांग्रेसले पुनः मतदान गर्न माग राखेको छ ।
भरतपुरमा रेनु दाहाल सात हजार मतले अगाडी चितवन । भरतपुर महानगरपालिकामा पाँचदलीय गठबन्धनमा नेकपा माओवादी केन्द्रबाट उम्मेदवार बन्नुभएकी रेनु दाहालले सात हजार ४१५ मतले अग्रता लिनुभएको छ ।
पोखरा महानगर प्रमुखमा गठबन्धन र उपप्रमुखमा एमालेको अग्रता पाेखरा । स्थानीय तह सदस्य निर्वाचन–२०७९ अन्तर्गत जारी मतगणनामा पोखरा महानगरपालिकाको प्रमुखमा सत्ता गठबन्धन र उपप्रमुखमा नेकपा एमालेका उम्मेदवारले अग्रता लिएका छन् ।
इटहरी प्रमुखमा कांग्रेस र उपप्रमुखमा एमाले सुनसरी । इटहरी उपमहानगरपालिकाको प्रमुखमा नेपाली कांग्रेसका उम्मेदवार हेमकर्ण पौडेलले ३३ हजार ४९ मत ल्याई विजयी हुनुभएको छ ।
काठमाडौंमा वालेन १७ हजारले भाेटले अगाडि, स्थापित तेस्राेमा काठमाडाैं । काठमाडौं महानगरपालिकाको मतगणना भइरहँदा स्वतन्त्र उम्मेदवार वालेन्द्र साहले १७ हजार भन्दा बढी मतान्तर बनाउनुभएकाे छ । यसअघि दोस्रो स्थान लिइरहनुभएका एमालेका उम्मेदवार केशव स्थापितलाई कांग्रेसकी सिर्जना सिंहले उछिन्नुभएकाे छ।
२५ वर्षपछि कांग्रेसको पुनरागमन बुटवल । नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलको गृहनगर बुटवल उपमहानगरपालिकाको मेयरमा नेपाली कांग्रेसका उम्मेदवार खेलराज पाण्डेयले फराकिलो मतान्तरले जित हासिल गरेका छन् ।
धनुषाको मिथिला विहारी नगरपालिकाको प्रमुखमा नेपाली कांग्रेस र उपप्रमुखमा माओवादी विजयी धनुषा । धनुषाको मिथिला विहारी नगरपालिकाको प्रमुखमा नेपाली कांग्रेस र उपप्रमुखमा केकपा (माओवादी केन्द्र) विजयी भएको छ । नेकपा (एमाले)का अनिलकुमार यादवलाई २१० मतान्तरले हराउँदै प्रमुखमा कांग्रेसका राजेन्द्रप्रसाद यादव विजयी हुनुभयो । राजेन्द्रले ४३०४ मत प्राप्त गरी विजयी हुँदा उहाँका निकटतम प्रतिद्वन्द्वी पूर्व प्रमुखसमेत रहनुभएका अनिलले ४०९४ मत प्राप्त गर्नुभयो । उपप्रमुखमा भने नेकपा माओवादीकी शोभादेवी साह विजयी हुनुभएको छ । साहले ३३३० मत ल्याउँदा उहाँको निकटतम प्रतिद्वन्द्वी नेकपा (एकीकृत समाजवादी)की अनिता कुमारीले २७९७ मत प्राप्त गर्नुभएको छ ।
स्थानीय सरकारको पहिलो निर्णय : स्वास्थ्य बीमामा छुटदेखि निःशुल्क बिजुलीसम्म तम्घास । गुल्मीका १२ पालिकामध्ये १० पालिकाका जनप्रनिधिले पदभार ग्रहण गरेका छन् । शुक्रबार पदभार ग्रहण गरेका पालिकाका जनप्रतिनिधिले स्वास्थ्य बीमामा ५० प्रतिशतसम्म छुट दिने, निःशुल्क विद्युत् उपलब्ध गराउने, एम्बुलेन्स खरिद गर्नेलगायतका निर्णय गरेका छन् ।
विगु गाउँपालिका प्रमुखमा माओवादी र उपप्रमुखमा एमाले निर्वाचित चरिकाेट । दोलखाको विगु गाउँपालिका प्रमुखमा नेकपा माओवादी र उपप्रमुखमा नेकपा एमालेका उम्मेदवार निर्वाचित हुनुभएको छ । गाउँपालिका प्रमुखमा गठबन्धनका तर्फबाट माओवादीका सञ्जीव ओली र उपप्रमुखमा एमालेका देविका थामी निर्वाचित हुनुभएको हो ।
यी हुन् नुवाकोटका १२ वटा पालिका हाँक्ने 'कमान्डर'हरु, कुन दलबाट को को ? नुवाकोट । जिल्लाका १२ वटै स्थानीय तहमा नयाँ नेतृत्व चयन भएको छ । गत वैशाख ३० गते भएको स्थानीय तह सदस्य निर्वाचन २०७९ अन्तर्गत शनिबार बिहान सम्पन्न मतगणनाको परिणामअनुसार नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एमालेका उम्मेदवारहरु प्रमुख पदहरुमा विजय भएका छन् ।
महाभारत गाउँपालिका अध्यक्षमा माओवादी र उपाध्यक्ष कांग्रेस बनेपा । काभ्रेकाे डाँडापारिस्थित महाभारत गाउँपालिकाको अध्यक्ष पदमा गठबन्धन दलको तर्फबाट नेकपा माओवादी केन्द्रका कान्छालाल जिम्बा र उपाध्यक्ष पदमा नेपाली कांग्रेसका सागर मोक्तान विजयी हुनुभएको छ ।
म्याग्दीमा सात प्रतिशत मत बदर म्याग्दी । हालै सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचनमा म्याग्दीमा सात प्रतिशतभन्दा बढी मत बदर भएको छ । जिल्लाका ६ स्थानीय तहको प्रमुख/अध्यक्ष, उपप्रमुख/उपाध्यक्ष, वडाध्यक्ष, दलित महिला, महिला र खुला सदस्य पदमा खसेको मतको ७.५७ प्रतिशत मत बदर भएको हो ।
बूढीनन्दा प्रमुखमा एमाले, उपप्रमुख स्वतन्त्र बाजुरा । जिल्लाको बूढीनन्दा नगरपालिको प्रमुखमा नेकपा एमालेका जनककुमार बोहरा र उपप्रमुखमा स्वतन्त्र उम्मेदवार रामबहादुर बोहरा विजयी हुनुभएको छ । जनकले पाँच हजार ११५ मत ल्याएर विजयी हुनुभएको छ ।
नुवाकोटको बेलकोटगढी मेयरमा माओवादीका गुरुङ निर्वाचित [मतपरिणामसहित] नुवाकोट । स्थानीय तह निर्वाचन २०७९ अन्तर्गत नुवाकोटको बेलकोटगढी नगरपालिका मेयरमा नेकपा (माओवादी केन्द्र) का उम्मेदवार जगतबहादुर गुरुङ (जगत लामा) निर्वाचित हुनुभएको छ । शुक्रबार सम्पन्न मतगणनाको परिणाम अनुसार पर्यटन व्यवसायीसमेत रहनुभएका गुरुङ १३ हजार २२२ मत ल्याई विजयी हुनुभएको हो ।
पोखरा महानगर प्रमुखमा गठबन्धन र उपप्रमुखमा एमाले अगाडि पाेखरा । स्थानीय तह सदस्य निर्वाचन–२०७९ अन्तर्गत जारी मतगणनामा पोखरा महानगरपालिकाको प्रमुखमा सत्ता गठबन्धन र उपप्रमुखमा नेकपा एमालेका उम्मेदवारले अग्रता लिएका छन् ।
भरतपुरमा रेनु दाहालकाे पाँच हजार बढीले अग्रता चितवन । भरतपुर महानगरपालिका प्रमुखमा पाँच दलीय गठबन्धनकी रेनु दाहालले पाँच हजार १३३ मत अन्तरले अग्रता लिनुभएको छ । उहाँले यहाँका १४ वटा वडा गणना गर्दा २७ हजार ४१२ मत प्राप्त गर्नुभएको छ ।
बोदेवर्साइन नगर प्रमुखमा जसपाका यादव निर्वाचित राजविराज । सप्तरीको बोदेबर्साइन नगरपालिकाको नगरप्रमुखमा जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालका आतेशकुमारसिंह यादव निर्वाचित हुनुभएको छ ।
विराटनगरको मेयरमा नागेश कोइराला निर्वाचित विराटनगर । विराटनगर महानगरपालिकाको मेयरमा नेपाली कांग्रेसका नागेश कोइराला निर्वाचित हुनुभएकाे छ । गठबन्धनका साझा उम्मेदवार नागेशले ३० हजार १ सय ७० मत प्राप्त गर्नुभएकाे छ।
कालिकोटको पचालझरनामा माओवादीको शानदारजित,प्रमुख, उपप्रमुखसँगै ७ वडामा निर्वाचित कालिकोट । २०७९ को स्थानिय निर्वाचनमा कालिकोटको पचालझरना गाउँपालिकामा नेकपा माओवादी केन्द्रले शानदार जित हासिल गरेको छ । गाउँपालिका अध्यक्षमा नेकपा माओवादी केन्द्रका देबराज शाही र उपाध्यक्षमा केन्द्रकै अल्किना बम निर्वाचित हुनुभएको छ। गाउँपालिका अध्यक्ष,उपाध्यक्षसँगै यस गाउँपालिकाको ८ वटा वडा मध्ये ७ वडामा माओवादी केन्द्र जनप्रतिनिधि निर्वाचित हुन सफल हुनु भएको छ ।
वाग्मती गाउँपालिकाको अध्यक्षमा घलान र उपाध्यक्षमा तिमिल्सिना विजयी मकवानपुर । मकवानपुरको वाग्मती गाउँपालिकाको अध्यक्ष पदमा गठबन्धनका तर्फबाट नेकपा (माओवादी केन्द्र) का उम्मेदवार सर्केश घलान सात हजार ३८४ मत प्राप्त गरी विजयी हुनुभएको मुख्य निर्वाचन कार्यालय मकवानपुर हेटाँैडाले जनाएको छ ।
मोहन्याल गाउँपालिकाको अध्यक्षमा निर्वाचित उपाध्यायलाई शपथ नगराउन आयोगको निर्देशन कैलाली । कैलालीको मोहन्याल गाउँपालिकाको अध्यक्षमा निर्वाचित हुनुभएका देवीदत्त उपाध्यायलाई पद तथा गोपनीयताको शपथ नगराउन निर्वाचन आयोगले निर्देशन दिएको छ । विशेष अदालतमा भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्दा विचाराधीन रहेका बेला नेकपा (माओवादी केन्द्र)बाट गाउँपालिका अध्यक्षमा निर्वाचित हुनुभएका उपाध्यायलाई शपथ नगराउन निर्देशन दिइएको हो ।
बागलुङका ८५ वडामा कांग्रेस ३७, माओवादी १७ र एमाले १६ मा विजयी बागलुङ । स्थानीय तह निर्वाचन २०७९ को अन्तिम मतपरिणाम सार्वजनिक हुँदा बागलुङमा नेपाली कांग्रेस छ वटा स्थानीय तहमा जीत हासिल गरेर पहिलो शक्ति बनेको छ । जिल्लाको बागलुङ नगरपालिका, काठेखोला गाउँपालिका, गलकोट नगरपालिका, बडीगाड गाउँपालिका, तमानखोला गाउँपालिका र निसीखोला गाउँपालिका कांग्रेसले जितेको हो ।
शिवराजको प्रमुखमा राप्रपा, उपप्रमुखमा एमाले निर्वाचित चन्द्रौटा । कपिलवस्तुको शिवराज नगरपालिकाको प्रमुखमा राप्रपाका अजय थापा र उपप्रमुखमा नेकपा (एमाले)की शिवकुमारी थारु निर्वाचित हुनुभएको छ ।शिवराज प्रमुखमा सात हजार ६०२ मतसहित अजय थापा र उपप्रमुखमा सात हजार ९५५ मतसहित शिवकुमारी चौधरी निर्वाचित हुनुभएको हो ।
भरतपुर महानगरपालिकामा ५५ हजार बढी मतगणना चितवन । भरतपुर महानगरपालिकामा ५५ हजार ६८० मतको गणना सकिएको छ । भरतपुरमा एक लाख २७ हजार ८३९ मत खसेको थियो ।
सत्ता गठबन्धन दुई तिहाइ बढी पालिकामा र एमाले १७५ मा निर्वाचित काठमाडौँ । स्थानीय तह सदस्य निर्वाचनमा सत्ता गठबन्धन आबद्ध दल दुई तिहाइ बढी पालिकामा विजयी भएका छन् । आज मध्याह्न १२ बजेसम्म मतगणना सकिएका ६३५ मध्ये ४२८ पालिकामा गठबन्धन आबद्ध दलका उम्मेदवार विजयी भएका छन् ।
केपी ओलीको गृहनगर दमकमा एमाले पराजित झापा । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको निर्वाचन क्षेत्र रहेकाे गृहनगर दमक नगरपालिकामा एमाले पराजित भएको छ।